Ikhaya Ohambweni! GFW - I-Airbnb
Ikhaya Ohambweni! GFW
Grand Falls-Windsor, Newfoundland and Labrador, i-Canada
Jabulela ukuhlala kwakho kuleli fulethi elisanda kwakhiwa, elikhanyayo, elinefenisha ephelele elinemibhede emibili ethokomele, nehhovisi. Leli fulethi lithuthukisa indawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela, indlela yokungena imoto, umshini wokuwasha nokomisa, kanye nendawo yomlilo kagesi ethokomele enikeza okokuqedela kulokhu kuhlala okuhle, ekhaya ohambweni. Itholakala kalula phakathi kwesibhedlela ne-Escloites Valley Mall, le ndawo ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya emizileni yokuhamba epaki ye-Gorge kanye nokwethulwa kwesikebhe, imizila yokushushuluza eqhweni ye-Grand Falls-Windsor kanye nenkundla.
Ikhaya lakho ohambweni linombhede omkhulu ontofontofo, umbhede olala abantu ababili, usofa ontofontofo, kanye nezindlwana ezimbili zamasosha zesivakashi esengeziwe.
Umbhede omkhulu ongu-1, 1 usofa, imibhede yomoya engu- 2
4.88 · 229 okushiwo abanye
OKWAKAMUVA: nakuba sihlale siziqhenya ngokukunikeza indawo yokuhlala engenabala, phakathi nalezi zikhathi ezingaqinisekile ze-COVID 19, sifuna uqiniseke ukuthi sithatha izinyathelo ezengeziwe zokuphepha ukuze siqinisekise ukuphepha kwakho kanye nokwethu.
Sitholakala ebangeni lokuhanjwa ngezinyawo ukuya komunye wemifula engcono kakhulu ye-salmon empumalanga ye-Canada, nemizuzu engu- ukusuka emigwaqweni yezwe engemuva ekuyisa ezindaweni zokuzingela ezihamba phambili, izindawo zokubhukuda zasendaweni kanye nemvelo enhle yase-Newfoundland. Imizuzu embalwa ukusuka ezindaweni ezithandwayo ezifana ne-Salmon Interpretation Centre, imizila yokushushuluza eqhweni, imizila yokuhamba, izinkundla zemidlalo, inkundla yokudlala, ishashalazi lemuvi kanye nesikhungo sokudlala sangaphakathi.
Kutholakala emizuzwini engu- ukusuka esibhedlela kanye ne-The Exploits Valley Mall.
I-Grand Falls-Windsor isendaweni ephakathi nendawo futhi iyindawo enhle ongavakashela kuyo.
Isivakashi sizoba nobumfihlo obuphelele futhi singaxhumana nathi ngomyalezo
Hlola ezinye izinketho ezise- Grand Falls-Windsor namaphethelo